प्रदेश नं. १ - मधेश लाइभ
गृह पृष्ठ » प्रदेश » प्रदेश नं. १
विराटनगर–१७ मा जसपाका वडाध्यक्ष प्यानलसहित निर्वाचित
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्वर १७ मा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले वडाध्यक्षसहित प्यानलै जितेको छ । जसपाका समिम कमर मियाँले १ हजार ४५० मत प्राप्त गरी विजयी भएका हुन् [...]
विराटनगर महानगरको मतगणना सुरु
विराटनगर। विराटनगर महानगरपालिकाको मतगणना सुरु भएको छ। भर्खरै सर्वदलीय बैठक सकिएपछि मतगणना सुरु भएको हो। वडा नम्बर १, २, १६, १७, १८ र १९ बाट गणना सुरु गरिएको हो। एकसाथ [...]
त्रुटिरहित आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न निर्देशन
विराटनगर । प्रदेश १ का प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) अरुणकुमार बिसीले स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी त्रुटिरहित आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएका [...]
विराटनगरबाट मानव कङ्कालसहित एक भारतीय नागरिक पक्राउ
विराटनगर । मोरङको विराटनगरबाट मानव कङ्कालसहित एक जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरिएको छ । पक्राउ पर्नेमा भारत विहारको पूर्णिया नगरपञ्चायत निवासी २६ वर्षीय आदित्य सिन्हा रहेका छन् । मंगलबार सशस्त्र [...]
सुनसरीमा बम विष्फोट हुँदा दुई जना घाइते
सुनसरी । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–१ नवजागृती टोलमा गए राती बम बिष्फोट हुँदा दुई जना घाइते भएका छन् । राति करिब १० बजे बम विष्फोट हुँदा सोही ठाउँका २२ वर्षीय रबिन [...]
निजी हातहतियार बुझाउन सुनसरी प्रशासनको आग्रह
सुनसरी । सुनसरी प्रशासनले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित तबरले सम्पन्न गर्नका लागि निजी हातहतियार बुझाउन स्थानीयवासीसँग आग्रह गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै इजाजत [...]
प्रहरीको हत्या घटनाका दोषीमाथि कडा कारबाही हुन्छ : प्रधानमन्त्री देउवा
मोरङ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लेटाङमा भएको घटनाका दोषीमाथि कारबाही हुने बताएका छन् । आज मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन शिलान्यास समारोहमा उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले शान्ति, [...]
मोरङमा झडप हुँदा एक प्रहरीको मृत्यु, विहानैदेखि कर्फ्यू
विराटनगर । मोरङको लेटाङस्थित यौन दुर्व्यवहारको घटनालाई लिएर भएको झडपमा एक प्रहरीको मृत्यु गएपछि प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले लेटाङ नगरपालिका–५ खेरूवा क्षेत्रमा आज [...]
प्रदेश १ मा एक राज्यमन्त्रीसहित १४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार
विराटनगर, २३ माघ । प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले १४ सदस्सीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका छन । गत असोज १६ गते गठन भएको सरकारलाई मुख्यमन्त्री राईले १ राज्य मन्त्रीसहित १४ [...]